Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ukusebenza njengesigqila iminyaka engama-20? Uxoshiwe!
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
I-Envoy Air iyinkampani yezindiza enkulu yesifunda enkulu kunazo zonke yezindiza zaseMelika.
Ukusebenzela inkampani yezindiza enjalo iminyaka engama-20 kusho ukuzinikela nokusebenza kanzima. Ngezinye izikhathi kungazizwa njengesigqila somsebenzi wakho.
Lapho usebenzela iSithunywa, akumele ukhononde. Futhi awukwazi ukukhomba iRush Hour, i-movie kaJackie Chan.
Kungakuthola ukuthi uxoshwe.
Encwadini eya ku UMthunywa Umoya abaphathi bomhla ka-Agasti 25, 2021, ummeli waseNew York U-Lee Seham kuthatha i-Envoy Air, esebenzisana ne-American Airlines, ukwenza umsebenzi wokunqamula abasebenzi abathathu ngokuzibiza "ngezigqila" nokucaphuna umugqa ovela kumdlalo webhayisikobho kaJackie Chan Ihora eli jahekile njengendlela yokuchaza ukuthi ireferensi ibingahloselwe ukucasula abanye.
Abasebenzi abathathu - uLosaolima Fonokalafi, Faye Tuala, no-Asefash Asfaha - ngamunye uneminyaka engaphezu kwamashumi amabili (20) yobudala. Ngokulandelana kwabo bangabokufika abavela eTonga, Samoa nase-Eritrea (Afrika), futhi baqashwa yi-Envoy njengo-Specialist Control Specialists.
UMthunywa uthole isizathu sokumisa uNkk Fonokalafi ngoba, ephendula umbono womkhandi wezindiza wokuthi usebenza kanzima, uvumile ukuthi yena nalowo asebenza naye basebenza “njengezigqila.”
Ngesonto elilandelayo, umlungu asebenza naye wabhekana noNkk. Fonokalafi mayelana nokuphawula kwakhe futhi waqinisekisa ukuthi "Impilo yabantu abaMnyama ibalulekile." UNks Asfaha - wase-Afrika-waseMelika ozalelwe e-Eritrea - uvikele uzakwabo ngokuchaza ukuthi uNkk Fonokalafi ungowaseTonga futhi unolwazi olwehlukile ngempilo kummangaleli wakhe omhlophe.
UNks Asfaha uqhathanise lo asebenza naye nomphenyi wamaphoyisa waseChina ongenacala kwi-movie ethandwayo owathi engahlosile washo amazwi acasulayo endaweni yokucima ukoma eyayenzelwe kuphela abantu base-Afrika baseMelika, futhi wanxusa uNksz Tuala ukuba amsize ekukhumbuleni le movie nendawo okwenzeka kuyo. UNksz Tuala unikeze igama le-movie nesilinganiso esifanele ukuze asize uNks Asfaha ekuchazeni ubumsulwa bukaNkk Fonokalafi.
UMthunywa unqamule uNkk Fonokalafi noNks Tuala ngezinsolo zokuthi benze “isigqila” esingalungile nangenxa yokuthi “bacaphune imigqa yama-movie” eyayicasula. UMthunywa unqamule uNks Asfaha ngoba esolwa ngokucaphuna imigqa efanayo yama-movie.
Incwadi kaMnu. Seham yango-Agasti 25, inikeze iSithunywa isibonelo esivela kwiBhodi Kazwelonke Yezobudlelwano Emsebenzini, sathi isisebenzi sinelungelo ngaphansi komthetho wezabasebenzi wokudlulisa izikhalazo mayelana nezimo zokusebenza sisebenzisa lolu limi. Uphinde wathi:
Yonke inhlanga ifakwa ebugqilini futhi yagqilaza abanye. Impi yokuqala yezwe lethu eyayibizwa nge-republic yayiphendula abaphangi base-Afrika ababegqilaze amatilosi angaphezu kwesigidi aseYurophu nawaseMhlophe aseMelika. Olimini lwesiNgisi, igama elithi "ukusebenza njengesigqila" noma "isigqila somholo" liyinkulumo ejwayelekile yokukhuluma engasho lutho ngaphandle kokuthi umuntu usebenzele kanzima ukuthola isinxephezelo esincane.
USeham uqhubeke wathi ukuqeda abasebenzi abasebenza impilo yonke ukuze kubhekiswe kumabhayisikobho athandwayo abamba imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 245 emhlabeni jikelele akunakulungiswa, ikakhulukazi lapho inhloso yesithenjwa bekungekhona ukona kepha ukuthuthukisa ukuqonda. Ngaphezu kwalokho, okuwukuphela komuntu owayekhona wase-Afrika-waseMelika ngaleso sikhathi kwakunguNks Asfaha, owanqunywa nguMthunywa.
Ngo-Agasti 30, uMthunywa uphendule kuMnu Seham wathi "kusetshenzelwa ekuqoqeni imininingwane yaleli cala."